Shir lagu soo xulayo xildhibaanada maamulka Jubba oo Kismaayo ka furmaya – Radio Muqdisho
Shir lagu soo xulayo xildhibaanada maamulka Jubba oo Kismaayo ka furmaya
Shir balaaran oo looga hadlaya xulitaanka xildhibaanada baarlamanka maamulka Jubba ayaa lagu wadaa in uu ka furmo magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose.
Wufuud ka socota dowladda Dhexe iyo wakiillo ka socda IGAD iyo beesha caalamka ayaa la filayaa in ay maanta gaaraan magaalada Kismaayo ayadoo ammaanka si aad loo adkeeyay.
Maalmihii la soo dhaafay waxaa magaalada Kismaayo ka socday kulamo looga doodayo qaabka loo xuli doono xildhibaannada maamulka, waxaana la kala dooran doonaa in lagu soo xulo qaab degaan ama qabiil ku saleysan.
Wariye Aadan Kismaayo ayaa sheegayo in doodad ku saabsan tirada xildhibaanada iyo qaabka loo marayo xulitaanka ay ka arrinsanayaan masuuliyiinta maamulka, odayaasha dhaqanka ayadoo ay dowladda dhexe la socoto.
Dadweyne iyo masuuliyiinta maamulka ayaa u diyaar garoobayo inay soo dhaweeyaan masuuliyiinta la filayo inay maanta gaaraan magaalada Kismaayo.
CABUDWAAQ: Iibka Xoolaha Nool oo hoos u dhacay